Ciyaaraha-Isku-aadka Wareega afar dhammaadka ee Euro 2016 xilliga Finalka laciyaarayo. – Radio Daljir
Ciyaaraha-Isku-aadka Wareega afar dhammaadka ee Euro 2016 xilliga Finalka laciyaarayo.
Luulyo 4, 2016 1:01 b 0
(July 04 2016)-Waxaa xalayto soo dhamaaday wareega 8da ee koobka Qaramada Yurub ee Euro 2016 iyadoo haatan ay afar kooxood isagu soo hareen tartanka ka socda dalka Faransiiska.
Xulalka Portugal, Wales, France iyo Germany ayaa isagu soo haray tartanka xiisaha leh ee Qaramada Yurub iyadoo midkood kooxahaan loo caleemo saari doono koobka qaramada Yurub marka la gaaro 10ka bishaan July.
Kulanka finalka waxaa la dheeli doonaa 10ka bisha July iyadoo ay ciyaarta finalka ka dhici doonto garoonka Stade de France ee magaalada Paris.
SEMI-FINALKA EURO 2016:
Portugal v Wales – 10ka habeenimo SGA
Germany v France – 10ka habeenimo SGA
FINALKA EURO 2016:
Portugal/Wales v Germany/France – 10ka habeenimo SGA
DHEGEYSO-Jubbaland oo beenisey inay siidaysay maxaabiis katirsanaa Alshabaab.